Filtrer les éléments par date : dimanche, 27 juin 2021
dimanche, 27 juin 2021 18:44
Polytechnique Antsiranana : Miakatra hatrany ny saram-pidirana
Mitaraina ireo mpianatra fa miakatra hatrany ny saram-pidirana na droit amin'ny fidirana ao amin'ny Polytechnique Antsiranana. Maro ireo tsy nahafantatra akory ny fiakarana sy ny anton'izany.
Lasa nisy sivana, na selection de dossier, ny miditra 4ème année, ny droit L1, L2, L3 300 000Ar, ny M1, M2 400 000Ar.
Teo aloha anefa ny L1, L2, L3 180 000Ar,ary ny M1, M2 240 000Ar.
dimanche, 27 juin 2021 17:43
Vanille : Nampandoalihina ny mpamboly
Raha nahatratra 200 000ar ny vidin'ny kilaon'ny lavanila maitso teo aloha, ary 1 500 000ar ka hatramin'ny 2 000 000ar ny masaka efa voakarakara, dia noho ny fidiran'ny fanjakana nitsabaka tamin'ny famerana ny vidin'ny la vanille, ary ny fikasan'ireo mpandraharaha akaiky ny fitondrana ankehitriny, dia nanenjana ireo mpamboly tsy hamarotra ny la vanille n'izy ireo ambanin'ny vidy napetraka.
Ankehitriny, lany vola ireo mpamboly, simba ihany koa ny entana, ka dia nandohalika nanaiky amarotra hatramin'ny 15 000ar ny kilao amin'izao ny tantsaha sasany.
Misy ireo nanapaka ny la vanille ary dia namotika ny fambolena.
Maro ireo potika fihariana izay niankina tamin'ny fidiram-bolan'ireo mpamokatra la vanille, toy ireo mpivarotra moto, mpivarotra panneau solaire...
Etsy ankilany anefa ny vidim-piainana tsy nisy fidinany, ka tonga amin'ny fitenenana mahazatra an'ireo mpamboly la vanille ny hoe, mitovy vidy amin'ny pomme de terre ny vanille.
dimanche, 27 juin 2021 16:24
Covid-19 : Manomboka mihanaka amin'ny firenena 85 ny variant Delta
Mbola matanjaka noho ireo endrika hafa efa hita ity variant Delta raha ny afainganam-pifindrany.
Tany Inde no nahitana azy, ary efa mihanaka amin'ny firenena 85 izy izao araka ny nambaran'ny OMS.
Russie no efa nanambara ny fihanak'ity variant Delta ity ho tompon'antoka amin'ny fahafatesan'olona maro be indrindra tany amin'izy ireo. Ny sabotsy lasa teo monja dia efa tafakatra 21 665 ireo tratran'ny aretina ka tsaboina, niakatra 25% ny tahan'ny olona tratran'ny aretina tao anatin'ny 7 andro, ary niakatra 33% ny isan'ireo maty.
Niverina nihiboka arak'izany ireo firenena maro, toa an'i Australie, Portugal, Royaume-Uni, Afrika Atsimo. Efa hita atsy Frantsa ihany koa ity variant Delta ity.
Nouvelle-Zélande, nanakatona mihitsy ny seranam-piaramanidina tsy nisy fepetra teo aloha nampitohy azy amin'ny Australie.
Afrika atsimo dia nandray fepetra henjana satria dia ny sabotsy lasa teo monja dia nahatratra 18 762 ireo tratran'ny aretina Covid-19, taha ambony indrindra hatramin'ny volana Janoary.
Raha ny fanadihadian'ireo manam-pahaizana momba ity valanaretina ity, dia mbola ambany ny tahan'ireo vita vaksiny, ka tsy mbola tratra ny fiarovana iombonana.
Ny OMS aza moa dia nilaza fa ho mafy ho an'i Afrika ity andihany fahatelo ity.
dimanche, 27 juin 2021 16:19
Toamasina : Feno 55 taona ny Petit séminaire Saint Paul Androranga
Feno 55 taona ny Petit séminaire Saint Paul Androranga eto amin'ny Diosezin'ny Toamasina.
Nankalazaina androany alahady faha 27 jiona izany izay notarihin'ny Son Éminence Cardinal Désiré TSARAHAZANA.
Tonga nanome voninahitra izany ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, ny Prefet ary ny Ben'ny Tanànan'i Toamasina Renivohitra.
Nisy ihany koa fanolorana vary sy menaka ho fanohanana ny Seminera zandriny.
dimanche, 27 juin 2021 13:44
Morondava : Mpiasan’ny fizahantany miisa fito arahi-maso ara-pitsarana
Mpiasa miisa fito ao amin’ny Fitalevam-paritry ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetr’andro Menabe no arahi-maso ara-pitsarana taorian’ny didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Morondava tamin’ity herinandro ity.
Fanararaotam-pahefana, fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka ary fanodikondinam-bola no vesatra anenjehana azy ireo, taorian’ny fidinana ifotony sy fanadihadiana nataon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly avy Antananarivo.
dimanche, 27 juin 2021 13:18
Mahabibo Kely – Mahajanga : Trano 21 tafo kilan’ny afo
Trano 21 tafo no kilan’ny afo tao Mahabibo Kely ny misasakalin’ny zoma hifoha ny sabotsy 26 jona 2021. Olona miisa 72 no traboina, avy amina fianakaviana miisa 18. Tsy nisy aina nafoy na naratra.
Nifarimbona namonjy voina teny an-toerana ny mpamono afon’ny Faritra, ny Kaomina ary ny an’ny ASECNA.
Nisy toeram-pivarotana iray koa no kilan’ny afo tao Mahajanga Be, akaikin’ny Port ny sabotsy 26 jona vao maraimbe, tokony ho tamin’ny 4ora sy sasany.
Tombanana ho “court-circuit” no nitarika ny fahamaizana tamin’ireo toerana roa ireo.
Nitondra ny teny fampaherezana ho an'ireo traboina sy nitondra izay voatsirambin'ny tanana ny ekipan'ny Fiadidiana ny tanànan'i Mahajanga.
dimanche, 27 juin 2021 13:17
Ady amin'ny Covid-19 : Ny Praiministra Ntsay Christian no hanambara ireo fepetra horaisin'ny fanjakana
Ny Praiministra lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian, no hitafa amin'ny vahoaka Malagasy mikasika ny fepetra horaisin'ny Fanjakana ao anatin'ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19, araka ny fampahafantarana nataon’ny avy eo amin’ny Primatiora.
Fandaharana harahina mivantana amin'ny TVM/RNM sy ireo haino aman-jery tsy miankina rehetra manerana ny Nosy, anio alahady 27 jona 2021 amin'ny 8 ora alina.